Global Voices teny Malagasy » Ny Mpamono Olona Be Indrindra ao Zeorzia? Ny Arabeny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Marsa 2017 4:50 GMT 1	 · Mpanoratra OC Media Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Zeorzia, Fahasalamàna, Fanoherana, Mediam-bahoaka
Ity manaraka ity dia dika avy amin'ny lahatsoratra mpiaramiasa  nosoratan'i Sulkhan Bordzikashvili , nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkala OC Media . 
Araka ny voalazan'ireo  nahita maso, nijoro teo amin'ny toerana iray fiandrasana fiara mpitatitra izy mianaka raha iny ilay fiara fa niala ny arabe, nandona takelaka iray aloha, ary avy eo nandona azy ireo.
Tamin'ny 2015, namoaka tatitra  iray ny Fikambanana Erantany misahana ny Fahasalamàna nilazàny fa isantaona dia olona 1,25 tapitrsa no maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Araka ny lazain'ny  Fikambanana ho Fiarahana Miasa Ara-Toekarena sy ho Fampandrosoana (OECD), i Zeorzia no manana ny taha ambony indrindra amin'ny fahafatesana ateraky ny lozam-pifamoivoizana ao Eoropa (163.6 isaky ny olona 1 tapitrisa). Mpandeha an-tongotra ny efatra amby roapolo isanjaton'ireo maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana ao Zeorzia.
Na nitombo aza ny isan'ny maty, tamin'ny 2014, nanomana andianà fanavaozana  ny Fepetram-Pitantanana ny Ministeran'ny Atitany, nanalefahana ireo sazy azo amin'ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny fifamoivoizana. Araka ilay tolodalàna, ny sazy ho an'ny fanitsahana tsipika mitohy tsy mitapaka, izay amin'izao fotoana izao dia ahazoana sazy ara-bola 100 lari (41 dolara), dia ho antsasany sisa. Ny sazy noho ny famerenan-keloka dia hahena ho 100 lari (41 dolara) fa tsy ho 200 lari (82 dolara) intsony. Tsy handoa 150 lari (61 dolara) intsony ireo tsy nahaloa ara-potoana ny saziny fa ho 40 lari (16 dolara).
Tamin'ny 2016, neken'ny  governemanta Zeorziana ny Tetikadim-Pirenena Ho Fisorohana ny Loza an-Dalambe. Marihan'ireo mpanoratra fa nilaina ny fandaniana ilay tetikady noho ny taha avoben'ireo fahafatesana ateraky ny lozam-pifamoivoizana. Samy nankatoa ilay tetikady ho ampiharina mandritry ny dimy taona daholo, na ny ministeran'ny Toekarena, Fampandrosoana isam-paritra, ny Asa sy ny Raharaha Sosialy, ny Fanabeazana sy ny Siansa, ary ny Fiadidiana ny Tanànan'i Tbilisi.
Tao anaty fanambaràna  iray, nolazain'ny Praiminisitra Giorgi Kvirikashvili fa vokatry ny sosokevitra nataon'ireo fikambanana iraisampirenena sy manampahaizana maro ilay fandraisana andraikitra.
Raha niresaka tamin'ny RFE/RL, Gela Kvashilava, mpanorina ny Road Safety Foundation, vondrona iray mpisolovava ao an-toerana, niteny  hoe ny olana fototra ho an'i Zeorzia raha resaka fiarovana an'arabe dia ireo arabe namboarina hifanaraka amin'ny fiara fa tsy ny olona.
Ilay tetikady  dimy taona dia heverina hikirakira ireo olan'ny fiarovana an'arabe, ny fifamoivoizana an-tanandehibe, ary ny tsy fahampian'ny toerana fiantsonana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/27/97384/
 lahatsoratra mpiaramiasa: http://oc-media.org/georgias-deadly-roads/
 Araka ny voalazan'ireo: http://www.interpressnews.ge/ge/samartali/424178-thvithmkhilveli-11-tslis-gogona-dedasthan-erthad-gacherebaze-idga-roca-manqana-jer-ganathebis-bodzs-shemdeg-ki-math-daejakha.html
 Araka ny lazain'ny: https://data.oecd.org/transport/road-accidents.htm